Taliyihii Ciidanka Kumaandooska DANAB oo xilkii laga xayuubiyay, mid cusubna la magacaabay – HalQaran.com
Muqdisho (Halqaran.com) – Taliyihii guutada 16aad ee kumandooska Danab Gaashaanle Ismaaciil Cabdimalik Maalin, ayaa xilkii laga qaaday kaasi oo la sheegay in muddo bil ka badan ku sugnaa Xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya, iyada oo uusan heyn wax Shaqo ah.
Taliye cusub ayaa loo Magacaabay Guutada 16 aad Kumandooska Danab, kaas oo lagu Magacaabo Gaashaanle Axmed Cabdilaahi Nuur (beeryare) oo ka tirsanaa Ciidamada Milateriga Soomaaliya xilal kala duwana soo qabtay.
Taliyihii xilka laga qaaday ee guutada 16aad kumandooska Danab Gaashaanle Ismaaciil Cabdimalik Maalin ayaa muddo bil ah Shaqeyn.
Nabaddoon Maxamed Xasan Xaad oo kamid ah Ehellada Gaashaanle Cabdi Maalik ayaa waxa uu sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu Shaqada ka joojiyay, islamarkaana la doonayo in la geeyo Xabsiga dhexe si shirqool loogu dilo, sida uu hadalka u dhigay.
Todobaadyadii la soo dhaafay ayaa aad looga hadal haayay Baraha Bulshada Shaqa joojinta Taliyihii guutada 16aad ee kumandooska Danab Gaashaanle Ismaaciil Cabdimalik Maalin, iyada oo Saraakiil ka tirsan Ciidanka Mareykanka ee Qaarada Afrika ee (AFRICOM) ay Garoonka diyaaradaha muqdisho kula kulmeen Madaxweyne Farmaajo, iyaga oo kala hadlay sababta Shaqa joojinta loogu sameeyay Taliyaha maadaama Ciidanka DANAB ay mushaar iyo saanadba uu siiyo Mareykanka.
Taliyihii guutada 16aad ee kumandooska Danab Gaashaanle Ismaaciil Cabdimalik Maalin ee xilka laga qaaday ayaa waxaa Ciidanka uu hoggaaminayo ee DANAB ay howlgallo ka fuliyeen deegaanno ka tirsan gobolada Shabeellooyinka, iyaga oo Al-Shabaab kala wareegay deegaanno dhowr ah.
Taliyaha cusub ee Gaashaanle Beeryare ayaa sanadkii 2013-dii ka mid noqday ciidankii dib lagu asaasay ciidan ka kumandooska Danab ee xoogga dalka, waxana uuna ka soo qabtay xilal kala duwan sida Taliye Koox, Taliye Hurin, Taliye Saadka, waxa uu tababar ciidan ku soo qaatay dalalka Uganda, Itoobiya, Turkiga iyo Maraykanka.
Tags: taliyaha ciidamada kumaandooska Danab, xil ka qaadis